Beauty - Bezzia | Bezzia (Pejy 7)
Ahoana ny famoahana ny loha
Aza adino ny fanodinana haingana ny hodi-dohanao. Ento ny volonao hanana fahazavana sy fiainana salama.
Makiazy mety tsara ho an'ny zazavavy misy solomaso
Amin'ity lahatsoratra hatsarana ity dia miresaka momba ny fomba hahazoana makiazy mety tsara ho an'ny zazavavy misy solomaso izahay, manaraka ny tetika kely sy ny toro-hevitra kely.
Fanafody an-trano ho an'ny volo voasazy
Jereo ny fanafody an-trano rehetra momba ny volo simba. Sarontava volo vita amin'ny avocado na menaka oliva.
Ahoana no hikarakarana volo fotsy?
Aza adino ny torohevitra tsara indrindra hikarakarana volo fotsy. Fanafody tonga lafatra mba hahitanao ny volon'ny volonao mitovy amin'ny elatra hatrizay.
Fomba fanaronana ny mangana amin'ny makiazy
Raha manana mangana amin'ny vatanao ianao ary te hanafina azy dia aza kivy ... Ny makiazy dia afaka manao fahagagana ary manao azy io ho toy ny hoditrao tonga lafatra.
Ahoana ny fomba fanaovana randrana herringbone tsikelikely
Raha te hanao randrana tsikelikely ianao, aza hadino izay rehetra entinay anio. Ianao dia hanao spaoro taovolo lamaody ao anatin'ny minitra vitsy.
Ahoana no hikarakarana ny volo may
Androany dia manolotra andiana fanafody sy tolo-kevitra izahay mba hahafahanao mitandrina ny volo may, mahazo aina ao an-trano. Ho hitanao tsy ho ela ny valiny!
Mikarakara volo tsara
Jereo ireto fikarakarana tsotra ireto ho an'ny volo tena tsara, volo mila habetsahana sy fikolokoloana mba tsy ho tapaka amin'ny fihetsika isan'andro.
Ilaina hatsaran-tarehy 10 ao anaty kitapo fidiako
Ireo no ilaina amin'ny hatsarana 10 ao amin'ny kitapo fidiako izay nofidiko. Tsy mora izany, saingy afaka manome toky anao aho fa amin'ireo 10 ireo dia averiko foana.
Ahoana ny fanasana ny volonao tsy misy shampoo
Ny fanasana ny volonao tsy misy shampoo dia azo atao izao. Aza adino ny fanafody voajanahary izay arosontsika anio. Araka izany dia tsy ho simba ny hodi-dohanao
Volo volo izay hotafinao amin'ny 2017
Jereo ny taovolom-bolo ho tianao hotratrarina amin'ny taona 2017. Fanapahan-doha ho an'ny karazana volo rehetra izay mandrobo be.
Amin'ity lahatsoratra ity dia mamakafaka ireo loko miaraka amin'ireo singa manimba ny volonay izahay ary manome anao safidy hafa ho an'ny loko mahazatra.
Ireo enina izay mifanaraka aminao indrindra mifanaraka amin'ny volon'ny hoditrao
Ireo no enina izay mifanaraka aminao indrindra mifanaraka amin'ny volon'ny hoditrao. Tsy hanana fialan-tsiny intsony ianao amin'ny tsy fitandremana ny hohoo sy ny fanomezana azy ireo loko misy loko.
Torohevitra sy tetika ho anao hikarakarana ny hoho ao an-trano
Amin'ity lahatsoratra hatsarana ity, natokana ho an'ny tanana sy ny hoho, dia manome anao toro-hevitra sy fitaka maromaro izahay mba hahafahanao mikarakara azy ireo any an-trano.
Fomba fanaovana volondavenona miaraka amin'ny kanto
Jereo hoe lasa volondavenona ho an'ny volonay ny volondavenona. Toy izany koa, eto ny tolo-kevitra tsara indrindra hampisehoana azy ireo.
Fantsika vokatry ny fitaratra, ny fironana lehibe amin'ny manicure 2017
Ny manicure 2017 dia feno fomba vaovao. Ny hoho vokatry ny fitaratra no ho mpiray antoka aminao indrindra. Jereo ity hevitra vaovao ity!
Volo lava miaraka amin'ny bangs, ny taovolo volon'ny kintana amin'ny taona 2017
Ny iray amin'ireo fironana lehibe amin'ny taona manaraka dia ny volo misy bangs. Jereo ny safidy rehetra mety aminao.
Ny maha-zava-dehibe ny fitrandrahana tarehy amin'ny hatsarana
Ilaina amin'ny fikolokoloana ny hoditra ny fanodinana hoditra, ary tsy maintsy omentsika azy ny lanja sahaza azy, miankina amin'ny tombony azo avy amin'izany.
Gaga ireo antoko ireo amin'ny antsasaky ny fanangonana
Raha mbola tsy fantatrao ny taovolo hataonao izay hahagaga ny vahininao dia aza hadino ireo asehonay anao anio. Semi-voaangona tsotra fotsiny ho anao.
Menaka sa moisturizer? Fananana sy tombontsoa
Menaka na moisturizer amin'ny vatana. Na dia toa safidy tsotra aza izany dia tsy izany foana. Androany dia lazainay aminao ny fananana sy ny tombony tsara indrindra.
Fomba fanamboarana hena notetehina Andalosiana, mety tsara amin'ny Krismasy
Hena voatoto ao anaty saosy, na hena "mechá". Ianaro ny fomba fanaovana an'ity fomba fahandro Andalusianina ity ary atolory amin'ny latabatrao mandritra ny fialantsasatra.
Fomba fanaovana serum an-trano hamelomana ny volonao
Omeo izay rehetra angatahiny ny volonao. Amin'ny fomba ahoana? Eny, miaraka amin'ireo fomba fahandro serum namboarina. Ho hitanao fa haingana ny fanaovana volo tonga lafatra!
Ny feon'ny volo mandoko indrindra amin'ny vehivavy brunette
Jereo ny volon'ny volon'ny vehivavy brunette. Hevitra tonga lafatra ho an'ny fanovana endrika, manaraka lamaody foana.
Ahoana ny fomba hamoronana manicure effet marbra
Raha tianao ny manicures tany am-boalohany sy kanto, aza hadino ny manicure effet marbra. Tsy misy fisalasalana, hevitra tsotra ary misy famaranana mahafinaritra.
10 fanomezana kosmetika mety lafo ho an'ny namana tsy hita
Androany dia manolotra fanomezana 10 ho an'ny kosmetika lafo vidy ho an'ny namana tsy hita maso izahay, na ho an'ny zazavavy na ho an'ny ankizilahy. Marina ve izany?
Taovolo 7 ho an'ny Krismasy, maoderina ary tsotra
Aza adino ireo taovolo 7 ireo amin'ny Krismasy izay asehonay anao. Raha mitady pickup tsotra sy haingana ianao dia eto no anananao!
Hevitra ho an'ny fantsika tena Krismasy
Aoka ianao ho maoderina indrindra sy mahafinaritra indrindra amin'ireo fety ireo manao endrika am-boalohany sy Krismasy amin'ny hohonao.
Fividianana ny vokatra fikarakarana manokana
Amin'ity lahatsoratra hatsarana ity dia mamintina izay mety ho fividianana ny vokatra fikarakarana manokana izay tokony hananantsika rehetra.
Inona ny piramidan'i Maslow
Tsy ny olon-drehetra no mahalala ny piramidan'i Maslow, saingy zava-bita lehibe ho an'ny tontolon'ny psikolojia izany. Tsy fantatrao va ny momba azy? Jereo
Hainao ve ny misafidy mascara mety?
Ny fahazoana vokatra iray eo amin'ny volomaso dia tsy hiankina amin'ny karazana mascara ampiasainao fotsiny, fa koa amin'ny borosy ampiharina.
Fehikibo fironana 6 hampifanaraka ny karazana volo rehetra
Tsy maninona na manana volo mikarepoka, lava na fohy ianao. Ny fomba rehetra dia mety manana fehiloha lamaody 6 toy ny atolotray anao.
Voafitaky ny volo varahina ianao amin'ity vanim-potoana ity
Aza adino ny hatsaran'ny volo varahina. Loko misy alokaloka sy taratra isan-karazany izay hanome fiainana ny volo. Jereo!
Fironana Ss'17: Volo ao ambadiky ny sofina
Nanomboka tamin'ny Herinandron'ny lamaody tany Paris farany teo dia namina ny iray amin'ireo fironana ho amin'ny lohataona manaraka izahay: mitafy ny volonao ao ambadiky ny sofinao.
Sarontava voajanahary ho an'ny hoditra mora tohina
Jereo ny fitsaboana tsara indrindra amin'ny akora voajanahary ho an'ny hoditra mora tohina
Torohevitra hampiasa tsara ny fanamainanao
Fahita matetika ny fampiasana ny volo fanamainana volo, fa ny fomba mety ve no ataonao ...? Zahao amin'ireto torohevitra tsotra ireto!
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny rano micellar sy ny rano mafana
Na dia manana anarana mitovy be aza izy ireo ary maro ny olona no tsy mampiasa azy io, misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny ...
Loko volo izay miverina amin'ny 2017
Jereo ny loko volo izay hametraka ny fironana amin'ny taona ho avy 2017. Hevitra lavorary hanome volo tsy nampoizina ny volontsika
Volo fohy sy taovolony hitafy amin'ny fety
Ny volo fohy dia mety ho mpiorina lehibe amin'ny antoko manaraka. Avelany hiaraka taovolo maoderina sy tonga lafatra atolotray anao anio izy ireo.
Volo afro: fikarakarana sy torohevitra
Amin'ity lahatsoratra ity momba ny hatsarana dia manome torohevitra vitsivitsy momba ny fikolokoloana sy ny fikolokoloana ny volonao afro ianao. Anjaranao ny manana volo tsara tarehy.
Jereo ny lokomena vaovao Kiko Milano
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay ireo karazana lokomena vaovao navoakan'ny orinasa Kiko Milano teny an-tsena. Mety ho an'ireo izay tia finina semi-matte.
Volo antsasaky ny taona 2017, inona ireo fironana ho hitantsika?
Raha te hahita ny fironana tsara indrindra amin'ny resaka taovolo ianao, anio dia manolotra anao ny volo antsasaky ny taona 2017. Miverina feno fomba sy toetra izy io.
Taovolo 4 ho an'ny vehivavy manana tarehy boribory
Aza adino ireo fomba taovolo efatra ho an'ny vehivavy manana tarehy boribory. Hevitra tena mandokadoka ary koa tsotra.
Angano sy fahamarinana momba ny loko tsy misy amoniaka tokony ho fantatrao
Betsaka ny fisalasalana mipoitra manodidina ireo antsoina hoe loko tsy misy amoniaka. Androany dia hahita izay rehetra tokony ho fantatrao izahay. Ny tombony sy ny angano.
Krimaso na volo eyeshadows, fantatrao ve ny fahasamihafana?
Ny eyeshadows dia hita amin'ny crème na vovoka. Iza amin'ireo no tianao ?. Jereo eto ny toetrany rehetra.
Taovolo fohy misy soritr'aretina, fatran'ny loko sy lamaody
Raha te-hanatsarana ny volonao fohy ianao, dia tsy misy zavatra asongadin-javatra miloko. Manomboka amin'ny raozy ka hatrany amin'ny loko mena midorehitra indrindra. Jereo izy ireo!
Volom-bolo vita amin'ny platinum, ny fomba hikarakarana sy hikolokoloana azy
Raha tianao ny volo miloko platinum, saingy mbola tsy nanapa-kevitra ianao dia ireto misy torohevitra tsara indrindra hikarakarana azy io sy hitazomana azy.
Ny fandokoana volo misy loko sahisahy Trend!
Jereo ireo loko sahisahy izay mirona handoko ny volonao amin'ity taona ity, manomboka amin'ny volomparasy ka hatramin'ny mavokely na manga ho an'ny volo.
Haircuts maoderina izay tsy tantinao
Raha mitady aingam-panahy ianao dia aza adino ireo taovolo maoderina izay asehontsika anao anio. Hevitra tonga lafatra ho an'ny volonao. Jereo izy ireo!
Saron-tava voajanahary 3 ho an'ny kilema amin'ny tarehy
Mitadiava saron-tava voajanahary telo mora sy lafo vidy hiadiana amin'ireo teboka miseho amin'ny tarehy noho ny fiovan'ny taona na ny hormonina.
Torohevitra hanalana volo haingana ny volo olioly
Aza kivy! Eto izahay no manana ny vahaolana tsara indrindra hanalana volo olioly. Dingana lavorary mba hisehoana mana manaitaitra.
Ny fisaintsainana ny volo, iza amin'ireo no tokony hofidina ary ahoana no hikarakarana azy ireo?
Raha mieritreritra ny hanao fisongadinana amin'ny volonao ianao dia aza hadino ny zavatra entinay anio. Jereo ny karazana fisaintsainana ary koa ny fikarakaran'izy ireo.
Niova ny volon'ny Kylie Jenner
Ny fiovan'ny fomba sy ny loko amin'ny volon'i Kylie Jenner dia efa vaovao avokoa, ary nampiasa ny loko isan-karazany tamin'ny volony izy.
Saron-tava voatabia mahafinaritra ho an'ny hoditra
Anio dia omeko anao ny fomba fanamboarana saron-tava voatabia maro izay hahitanao vokatra tena tsara ... hisaotra anao ny hoditrao!
Volo lava, inona ny anao?
Inona no lava volo lava tianao? Raha mbola manana fisalasalana ianao dia tadiavo ny hevitra tsara indrindra sy maoderina napetrakay taminao androany.
Safidy safidy ny vehivavy mahitsy - ary ny lehilahy sasany dia misafidy hanana volo mahitsy sy tsara kokoa. Hainao ve ny manao azy?
Tena mora ny famolavolana fantsika amin'ny Halloween
Raha efa voaomana ny zava-drehetra amin'ny alina mampatahotra indrindra ianao dia aza hadinoina ireo firafitry ny fantsika amin'ny Halloween ireo. Hevitra tena tsotra azo adika.
Fomba fampiharana tsara ny famirapiratra
Youtuber Kelly Marissa dia mampianatra antsika ny fomba fametrahana am-polony mazava tsara tsy misy patsa ary amin'ny famirapiratana no hany protagonista.
Haircuts halavany antonony, ahoana no hanaovana azy?
Ny haircuts lava lava dia manome antsika ny lamaody tsara indrindra. Taovolo mirindra sy tsotra izay hifanaraka amin'ny tsirontsika. Jereo izy ireo!
Torohevitra voafaritra tsara amin'ny fisafidianana loko volo
Ireto ny toro-hevitra voafaritra, izay tompon'andraikitra amin'ny famaritana ny isa ny loko tsirairay. Safidio ny loko sy ny lokon'ny volo mety indrindra aminao!
Fambara famantarana fa manana tatoazy voan'ny aretina ianao
Ny fananana tatoazy voan'ny aretina dia mety ho olana lehibe raha tsy fantatrao izay tokony hatao hanasitranana azy ary hahafahanao mampiseho izany amin'ny toe-javatra tonga lafatra.
Mamitaka hanana volo mamirapiratra sy malefaka
Ny fanananao volo mamirapiratra sy malefaka isan'andro dia azo atao raha zatra ny fahazarana sy fikarakarana sasany izay ho mora raisina.
Fironana amin'ny fantsika amin'ity fararano 2016 ity
Jereo ny fironana fantsika rehetra amin'ity fararano 2016 ity, miaraka amin'ny hevitra tsara miainga avy amin'ny tonony maizina mankany amin'ny miboridana sy mamirapiratra.
Volo 2017, miomàna amin'ny fironana vaovao!
Te hahafantatra ve ianao hoe inona no hihety volo amin'ny 2017 izay handresy? Ka aza hadino ny safidinay izay nataonay ho anao.
Makiazy Halloween, hevitra mahafinaritra
Izahay dia manome anao hevitra mahafinaritra sy mampatahotra mba hamoronana makiazy Halloween tsara, manomboka amin'ny Catrina mahazatra ka hatramin'ny Maleficent.
Hevitra momba ny makiazy amin'ny maso amin'ny Halloween
Raha te hanamboatra ny masonao amin'ny fomba miavaka amin'ny Halloween ianao dia aza hadinoina ireo hevitra ireo mba hahazoanao aingam-panahy sy hahitanao ilay tianao indrindra.
Fanafody kohaka namboarina
Aza adino ny fanafody any an-trano ho an'ny kohaka amin'ireny fika amin'ny renibeny ireny mba hanampiana ny tendanao amin'ny fotoana mahasosotra anao. Atsaharo ny kohaka.
Nahoana no zava-dehibe ny fikolokoloana ny hoditra?
Imbetsaka isika no tsy mahafantatra ny maha-zava-dehibe ny fikolokoloana ny hodintsika. Ary ny fikarakarana izany dia tena ilaina fa tsy ...
Fanabeazana hatsaran-tarehy vehivavy Japoney
Ny hatsaran'ny vehivavy Japoney dia tsy azo isalasalana, ary ireto misy tetika hatsaran-tarehy vitsivitsy izay lavorary foana.
Fananana menaka Rosemary ho an'ny hatsaranay
Ny menaka Rosemary dia menaka fantatra nandritra ny taonjato maro, izay manana fananana lehibe hikarakarana ny hatsaran-tarehintsika.
Loko volo amin'ity fararano ity
Ny fahatongavan'ny fararano dia feno fanovana, fotoana mety hilalaovana amin'ny volonao. Jereo ireo loko izay mitarika amin'ity vanim-potoana ity.
Fandram-bolo mahazatra amin'ny endrika tanora sy chic kokoa
Aza adino ireo taovolo mahazatra ireo izay misy fomba maoderina sy tanora. Raha tsy fantatrao izay karazana taovolo hanaovana isan'andro, eto dia asehonay anao.
Ahoana ny fanapahana volo, fampianarana video telo tsotra be
Te-hanapaka tsara ny volonao ve ianao ao an-trano? Afaka manao izany ianao izao, noho ireo fampianarana video asehonay anao ireo. Sahia ny tenanao !.
Nahoana ianao no mila latabatra fisoloana akanjo ao amin'ny efitranonao?
Ny latabatra fiakanjoana dia tanjon'ny faniriana izay tian'ny rehetra hatry ny fahazazany tao amin'ny efitranony ...
Taovolo fampakaram-bady ho an'ny vahiny lavo
Mahita hevitra vaovao amin'ny taovolom-panambadiana ho an'ny vahiny lavo. Miaraka amin'ny vanim-potoana vaovao dia mila manova ny fomba taovolo ianao.
Fironana makiazy latsaka
Ny fironana makiazy amin'ny fararano dia milaza amintsika fa ny molotra mainty, ny matte ary ny akanjon'ny miboridana no tonta, saingy mbola betsaka noho izany.
Ny randrana Elsa dia iray amin'ireo taovolo ankafizin'ny tsirairay
Atorinay anao ny fomba fitafy sy fanaovana taovolo lamaody. Momba ny randran'ny Elsa. Miloka aminy ho an'ny fety tsara indrindra!
Hispanitas dia manolotra ny fanangonana fararano-ririnina 2016/17
Fanangonana kiraro sy kiraro avy amin'ny Hispanitas ny fararano-ririnina. Tsy hadino. Havaozy izao ny faladianao.
Taovolo tsy manam-paharoa sy tsotra izay tsy maintsy andramanao amin'ity vanim-potoana ity
Aza adino ity safidy taovolo tsy manam-paharoa ity. Fomba tena izy ary tsy dia mahazatra loatra izay ho hitanao amin'ireo fanangonana ireo izay asehonay anao.
Fanafody an-trano hamotsiana ny nifinao
Ny manafotsy ny nifinao dia tsy ho sarotra be raha apetrakao ireo fanafody ao an-trano ireo, mora sy mandaitra daholo. Aza adino izy ireo!
Volom-bolo sy hevitra volom-bolo isan-karazany adika
Volo-bolo izay manana safidy amin'ny taovolo maromaro. Ity no asehonay anao anio hahafahanao misafidy endrika lamaody vaovao isan'andro.
Lipolaser handany lanja tsy misy fandidiana
Ny lipolaser dia teknika vaovao hampihenana lanja nefa tsy mila mandalo fandidiana. Jereo ny antsipiriany rehetra hahalalana hoe inona izany!
Ireo marika lipstick 5 izay sarobidy indrindra amin'ny mpampiasa
Ny iray amin'ireo zavatra ilaina amin'ny makiazy dia tsy isalasalana fa ny lokomena. Eny, ilay entintsika amin'ny zavatra rehetra ...
Volo voajanahary vs volo nolokoana
Raha mbola tsy nolokoinao ny volonao na te hijanona fa tsy afaka mamorona ny sainao dia ireto misy antony manampy anao handray fanapahan-kevitra tsara indrindra
Hevitra taovolo ho an'ny hiverina any an-tsekoly
Aza mandany fotoana bebe kokoa eo alohan'ny fitaratra. Adikao ireto taovolo taovolahy ireto ary ankafizo ny kilasy sy ny fanaonao amin'ny fomba mety indrindra.
Taovolo ambany tsara tarehy miaraka amin'ny dingana tsikelikely
Ireo taovolo ambany kanto izay asehontsika anao anio dia safidy mety indrindra hanaovana anao ary tsy misy fahasarotana. Aza adino izy ireo !.
Sarontava hoditra glycerine an-trano 5
Ny sarontava glycerine an-trano dia tsara indrindra amin'ny fanalefahana ny hoditrao sy fitsaboana azy amin'ny olana maro samihafa. Ireto misy fomba fahandro 5.
Firavaka sy kavina amin'ny volo, fironana harahina
Ny firavaka sy kavina amin'ny volo dia fironana tena ankehitriny, izay ho hitantsika bebe kokoa hatrany, fomba vaovao handravahana ny volo.
Fantatrao ve ny fampiasana zana-katsaka ho an'ny volo?
Cornstarch ho an'ny volo dia afaka manome antsika fanafody mahomby amin'ny volo maina na frizzy. Jereo eto daholo ny zava-drehetra!
Sarontava otrikaina 5 namboarina hikarakara ny hoditrao
Ny saron-tava oatmeal vita an-trano dia tsara amin'ny fikolokoloana ny hoditra, ary ireo 5 ireo dia hanampy anao hitazona ny hoditry ny masonao.
Fananana sy fampiasana selera tsara indrindra ho an'ny volo
Jereo ny fampiasana seleria ho an'ny volo ary koa ny fananany ary izay rehetra mety hanampy antsika. Misaotra fa hahazo volo salama kokoa ianao
Taovolo 6 tsikelikely izay azonao adika mora foana
Ny taovolo an-dàlana tsikelikely dia tsy mbola tsotra toy ny asehonay anao anio. Hevitra tonga lafatra sy kanto izay azonao adika mora foana.
Fanavaozana mikorontana izay tianao hotafiana amin'ity vanim-potoana ity
Ny Messo updo dia safidy mety mihoatra ny tonga lafatra ho an'ny vanim-potoana tsirairay. Jereo ireo hevitra maivana sy maoderina ireo
Fomba ahazoana onja tonga lafatra amin'ny volo fohy
Ny volo fohy dia mety tsara ihany koa amin'ny famoronana taovolo mifangaroharo. Hevitra izay tsy miala amin'ny fombany ary afaka manao izany mora foana ianao.
Sakafo 7 hisorohana ny fihenan'ny volo
Mitadiava sakafo fito afaka manampy anao hahazo sakafo voalanjalanja hisorohana sy hiadiana amin'ny fihenan'ny volo.
Fomba fanamboarana makiazy saka-maso tonga lafatra ary tsikelikely
Raha te-hanao makiazy saka-maso tonga lafatra ianao dia aza hadino ireo hevitra asehontsika anao anio ireo. Asongadino ny maso ary asehoy ny fijery manintona be
Fetsy tsy mety diso ho an'ny manicure trano tsara
Mora ny manao manicure an-trano tsara raha mora fantatsika ny tetika mahaliana, ka manome torohevitra vitsivitsy anao hahatratrarana izany.
Hevitra tena tsotra momba ny manicure miboridana miaraka amin'ny mainty
Ny manicure miboridana miaraka amin'ny loko mainty dia manome fomba tonga lafatra ho an'ny hoho. Jereo ireto ohatra tsotra ireto ary atambaro araka izay irinao
Mahitsy Japoney: inona no tokony ho fantatrao
Raha te hanao mahitsy Japoney ianao dia mila mandinika zavatra vitsivitsy hanapahana hevitra raha tena safidy mety aminao na tsia.
Fanavaozana fampakaram-bady 6 mahazatra sy kanto
Anio dia asehonay anao ao amin'ny Bezzia taovolom-panambadiana enina mahazatra sy kanto. Enina ambany no voaangona, tsy misy fitaovana fanampiny, izay tsy miala amin'ny lamaody.
Jereo izay atao hoe Keratin Straightening
Ny fanitsiana keratin dia fantatry ny vehivavy bebe kokoa amin'ny valiny tsara, saingy tsara toa ny fanaovan'ny tsirairay azy?
Mendrika handeha brunette ve? Manapaha hevitra ho anao
Raha sahirana ianao hitandrina ny hoditrao ary manomboka misalasala ianao raha ratsy toy ny nolazain'izy ireo ny volontsôkôlà, aza matahotra fa manampy anao izahay manapa-kevitra.
Taovolo izay mamelombelona, ​​hevitra 4 tonga lafatra azo adika
Mitady taovolo mamelombelona? Eto izahay dia mamela anao hanana hevitra lavorary efatra hahazoana izany. Mila mamela ny tenanao ho entin'ny fironana fotsiny ianao.
Voalohany dia ilay Bob ary tonga izao ny Lob cut, fantatrao ve?
Ny lob cut dia mitohy ao anatin'ny taranaka Bob. Taovolo izay manasongadina ny halavan'ny volo. Fantaro ny momba azy rehetra!
Fitaovana volo amin'ny fironana fahavaratra!
Ny kojakojam-bolo dia mety amin'ny fahavaratra, mba tsy hanasarotantsika ny fiainantsika amin'ny taovolo.
Ahoana ny fomba hanaovana volo tonga lafatra mando
Matetika amin'ny fahavaratra dia manapa-kevitra ny hametraka ny masinina izahay ary hanome ny volonay hikasika ny vokany ...
Maxi eyebrows: malaza izay nanatevin-daharana ny lamaody sy ny fomba ahazoana azy ireo
Mihabetsaka ny olona malaza misafidy volomaso maxi matevina sy voajanahary, nefa miaraka amin'izay dia voafaritra tsara sy karakaraina tsara.
Taovolo namboarina ho an'ny fanatanjahan-tena
Afaka mijery tsara tarehy ianao ary vonona amin'ny fampihetseham-batana mahery vaika. Manampy anao amin'ny taovolo sasany tany am-boalohany izahay mba hahafahanao mandeha tsara sy kanto.
Pickup tsotra hatao amin'ny minitra farany
Ny fanavaozana tsotra dia manome antoka ny vokatra tsara hitafy amin'ny fety na fampakaram-bady. Azonao atao ny manao azy ireo amin'ny fanarahana ireo dingana arosonay
Ahoana ary rahoviana no mampihatra ny anti-cellulite
Ny fomba sy ny fotoana fampiharana ny anti-cellulite dia tena zava-dehibe, satria amin'ny fikirizana sy fampiharana tsara ihany no hahatratrarantsika vokatra.
Ny fironana volo 90 dia niverina
Ho gaga ianao firy fironana volo ankehitriny no tsy zava-baovao. Tongasoa eto amin'ny fahaterahan'ny 90 taona.
Ahoana ny fomba hampiharana «highlighter»
Ilaina ny manome hazavana ny tarehintsika rehefa manao makiazy isika, koa androany dia tiako ny hanome anao torolàlana fototra momba ny fomba ...
Fomba fanamafisana ny volo tsara sy malefaka
Jereo ny fomba fanamafisana ny volo tsara amin'ireo fanafody ireo. Hanafika ny olana izahay na ivelany na anatiny. Ampiharo izy ireo!
Ahoana ny fomba ahazoana fo manafika volamena
Fantatsika fa ny filentehan'ny masoandro tsy misy fitandremana dia mihoatra ny ratsy. Mety hiteraka kentrona sy melanoma amin'ny vatantsika io, fa ...
Sahy ve ianao amin'ny blaogy platinum?
Betsaka ny olo-malaza nitolo-batana tamin'ny platinum blonde. Na izany aza, tsy loko mora izany, mila fikojakojana be dia be. Atorinay anao ny lakile.
Fomba tsotra 4 hanamboarana fomba bob
Eto izahay dia mampiseho hevitra efatra tonga lafatra hitafy fomba bob. Fanapahana lamina fironana izay azonao atao tsara.
Torohevitra hanafina ny volo kely
Raha manana volo kely ianao ary te hanafina izany amin'ny fanapahana na taovolo tsotra dia aza hadinoina izay rehetra manaraka. Ankafizo ny volonao amin'ny volonao.
Perfume tsara indrindra: 2016 Academy Awards
Ny Akademia Perfume dia nisafidy menaka manitra faran'izay tsara tamin'ny taona 2016. Ireo no mpandresy.
Fahadisoana mahazatra sy manimba amin'ny hoditra
Misy lesoka hatsarana izay fahita loatra ary raha manamboatra azy ianao dia manimba ny hoditrao. Jereo izy ireo mba tsy hanadino azy ireo bebe kokoa.
Soleta ho an'ny hoditra misy menaka miaraka amin'ny mony
Ny makiazy ho an'ny hoditra misy menaka sy mony dia tsy maintsy misy toetra manokana ary manokana ho an'ity karazan-koditra ity, hisorohana ny famirapiratana.
Fanapahana asymmetrika 6 izay tsy miala amin'ny lamaody mihitsy
Ny fanapahana asymmetrika dia tsy miala amin'ny lamaody mihitsy. Noho izany, raha mieritreritra fiovan'ny endrika ianao dia asehonay anao ny hevitra 6 momba ny taovolo tonga lafatra ho anao. Adikao izy ireo!
Ny menaka masoandro tsara indrindra, hoy ny OCU
Ireo no crème de sun tsara indrindra, hoy ny OCU, izay ho hitantsika eny an-tsena. Efa nampiasa ny iray amin'izy ireo ve ianao?
Ahoana ny fomba hahazoana tan tsara
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny fomba hahazoana tan tsara amin'ny alàlan'ny fanarahana dingana vitsivitsy alohan'ny fiposahan'ny masoandro ary holazainay aminao ny curiosities sasany.
Ahoana ny fomba hampihenana ny haben'ny tratra voajanahary
Raha te hampihena ny haben'ny tratranao ianao dia tokony ho fantatrao fa mahavita azy voajanahary ianao ary tsy mila manohy mijaly sy mangirifiry.
Mitadiava akanjo milomano tonga lafatra sy tsy lavorary
Izahay dia mitondra anao ny tetika hisafidianana ny akanjo fitondra milomano tianao na inona na inona toetranao, satria zonay rehetra ny mampiseho ny vatantsika amin'ny avonavona.
Taovolo no nanangona tsikelikely, hevitra 4 ho an'ny fetinao
Aza adino ireo hevitra efatra momba ny taovolo nangonina ireo. Taovolo haingana, tsotra ary matsiro. Mahazoa aingam-panahy ary asehoy azy ireo amin'ity fahavaratra ity!
Te hanana volo salama kokoa ve ianao? Ampiasao ny rano rosemary
Jereo ny tombony rehetra amin'ny rano rosemary. Fampidirana tonga lafatra ho an'ny volontsika mba hiseho mamiratra sy salama kokoa.
Fitaovana volo, ilaina amin'ny fahavaratra
Jereo ireo kojakoja ilaina amin'ny volo ilaina amin'ny vanin-taona mafana. Satroka, fehiloha, fehiloha ary maro hafa.
Fikarakarana volo eo amoron-dranomasina na pisinina
Jereo ny fikarakarana volo tsara indrindra amin'ny fahavaratra, ho an'ny morontsiraka sy ny pisinina. Hevitra azo ampiharina hitazomana ny volonao ho salama.
Hevitra taovolo miaraka amin'ny bangs
Raha mitady hevitra momba ny taovolo amin'ny bangs ianao, eto dia safidim-panafody tena mandika. Aza adino ireo ohatra ireo!
Esory voajanahary ny volo maniry
Mianara manafoana ny volo mitete amin'ny fomba mora indrindra sy voajanahary indrindra. Tsy ho olana ho anao intsony izy ireo.
Hevitra manicure mora 10 ho an'ity fahavaratra ity
Jereo ireo hevitra manicure mora folo arosonay. Hanao fantsika tonga lafatra ianao amin'ity fahavaratra ity, miaraka amin'ny loko sy endrika amam-bika
Fanavaozana avo lenta, hevitra kanto amin'ny fampakaram-bady amin'ny fahavaratra
Ianao ve mitady taovolo ho an'ireo fampakaram-bady ho avy ireo? Ka ahoana ny hevitrao momba ny avo voangona? Aza adino ireo hevitra kanto ireo!
Hippie taovolo hevitra ho an'ny tena fomba voajanahary
Ny taovolo Hippie dia manana izany rivotra voajanahary sy maoderina ilaintsika amin'ny fijerintsika izany. Aza adino ny hevitry ny semi-voaangona, ny randrana ary ny buns
Ahoana ny fomba hahazoana molotra matte tonga lafatra
Te hanana molotra matte tonga lafatra ve ianao? Aza adino ireo torohevitra ireo, ary koa ny sonia sy loko tsara indrindra hisafidianana.
Fironana mihety volo amin'ny tarehy boribory
Raha te hahalala hihety volo amin'ny tarehy boribory ianao dia aza hadinoina ireto hevitra manaraka ireto hisafidianana ny tsara indrindra ho anao sy ny fombanao.
Inona no fiantraikan'ny tsingerinao eo amin'ny hoditrao?
Ny vehivavy rehetra dia nandalo izao toe-javatra izao: mandeha amin'ny fety izahay, fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny namana iray na ...
Ahoana no fomba hamoronana lokomena anao
Raha te hanana lokomena ianao ary manaova akora mora hita, aza hadino ity fomba fahandro ity.
Fomba 8 hanaovana taovolo randrana herringbone
Ny randrana herringbone no kintan'ireo taovolo fironana valo ireo. Manomboka amin'ny updo ka hatrany amin'ny pigtails ary ny taovolo. Jereo izy ireo ary alaho izy ireo!
Fananana sy tombony azo avy amin'ny menaka Neem
Ny menaka Neem dia menaka tsy dia fantatra loatra izay avy amin'ny Indiana, izay azo ampiasaina amin'ny fitsaboana hatsaran-tarehy maro isan'andro.
Torohevitra hananganana maso hazel
Raha manana maso hazel ianao, dia eo amin'ny fotoana nianaranao ireo torohevitra ireo mba hahitana endrika tsy mampino. Sahy manandrana azy ireo ve ianao?
Inona no ilana ny borosy sy ny spaonjy tsirairay?
Inona no fampiasana ny borosy sy ny spaonjy tsirairay avy ao anaty kitapo fidianao? Raha mbola misalasala ianao dia ho anao ity lahatsoratra ity.
Volo: ahoana no hanaovana fisongadinana blonde ao an-trano
Te hanao fampisongadinana volamena ao an-trano ve ianao? Araho ny torohevitray hahazoana vokatra tsara indrindra amin'ny fandokoana ao an-trano.
Ahoana ny fomba fanamafisana ny fantsika an-trano
Te hahafantatra ny fomba fanamafisana ny hoho namboarinao manokana ve ianao? Asehonay anao ny fomba fanamboarana tsara indrindra hanamboarana ny nohamafisanao hoho
Tatoazy vehivavy mahafatifaty
Ny tatoazy dia miha-lamaody ary vehivavy maro no sahy mankafy ny tombokavatsa mahafatifaty amin'ny hodiny. Te hanana hevitra ve ianao?
Fampiasana sy fananana tanimanga maintso ho an'ny volo
Ny tanimanga maintso dia atolotra indrindra ho an'ny volo. Te hahafantatra ny antony sy inona ny fananany ianao? Aza hadino izay rehetra asehonay anao
Fantsika manjelanjelatra, ny hamirapiratra ilain'ny manicure
Ianao ve mitady manicure maoderina sy manavao? Avy eo, aza adino ireo hevitra fantsika manjelanjelatra izay hiposaka na aiza na aiza alehanao.
Fitsaboana botox volo hanatsarana ny volo
Ny fitsaboana botox amin'ny volo dia manampy amin'ny fanatsarana ny volo amin'ny famaohana azy io lalina. Jereo ny tombony an'io fitsaboana volo io.
Hevitra ambany ambany momba ny volo salantsalany
Ny antsasaky ny volo koa dia mamela antsika hanana taovolo sy fanavaozam-bolo izay toa ho lava kokoa ny volontsika. Jereo ireo hevitra ireo!
Manaova menaka manitra anao manokana
Mamorona ny fofonao manitra miaraka amin'ny akora natoraly, amin'ity fomba ity dia hataonao tsy manam-paharoa ny menaka manitrao ary tsy dia manimba ny hoditrao.
Fantsika gel mena, kilasika izay miasa foana
Ny fantsika gel mena dia kilasika mahafinaritra izay mora mifanaraka amin'ny makiazy sy akanjo. Ho fanampin'izany, maro ny endrika kanto vita amin'ny fantsika.
Alohan'ny pigmentation alohan'ny fandokoana dia maharitra kokoa ny loko
Ny Pre Pigmentation dia dingana iray tena ilaina mba hijanonan'ny loko ny loko ary haharitra ela kokoa. Ianaro ny fomba fanaovana azy amin'ireto tetika tsotra ireto
Fitsaboana voajanahary amin'ny dipoavatra ho an'ny volo
Peppermint dia iray amin'ireo mpiara-miasa tsara indrindra amin'ny volo rehefa miresaka momba ny fitsaboana voajanahary isika. Jereo izay rehetra azon'ity zavamaniry atao amin'ny volonay ity
Fanafody voajanahary hanala ny fery amin'ny hoditra
Raha sendra misy fery eo amin'ny hoditra ianao dia mety tsy tianao ho hita izy ireo na farafaharatsiny mba tsy ho hita loatra, aza hadinoina ireo fanafody ireo hahazoana izany.
Ahoana ny fomba fampisehoana tongotra 10 eo ho eo amin'ity fahavaratra ity
Tonga ny fotoana hanesorana ny stockings antsika, ary tsy ho ela dia hiakatra ny mari-pana ary ho tonga ny ahiahy lehibe ...
Fomba fanaovana tsipìka mora ho an'ny andro
Aza adino ireo hevitra momba ny fanaovana tsipìka asehonay anao. Taovolo haingam-pandeha, mora ary maoderina hahagaga ny fanendrena anao rehetra mandritra ny andro.
Fampiasana deodorant izay tsy fantatrao
Mety ho zatra mampiasa deodorant amin'ny soronao ianao satria io no faritra mafana indrindra amin'ny ...
Bob nanapaka, ny tombony amin'ity taovolo ity
Ny bob cut dia iray amin'ireo fomba malaza indrindra satria io no iray amin'ireo be mpampiasa indrindra. Fantaro izay tombony sy fatiantoka entiny
Fa maninona no mamaly ny hafatrao izy raha tsy liana aminao izy?
Misy lehilahy mamaly ny hafatry ny vehivavy fa tsy tena manazava ny zava-misy. Fa maninona ianao no manao an'izany?
Pigtails voahidy, ny taovolo taovolo
Ny pigtails vita amin'ny kofehy dia iray amin'ireo endrika lamaody lehibe amin'ity taovolo mahazatra ity. Tononkalo avo, ambany na amin'ny lafiny hafa ... tadiavo hoe iza avy ny anao !.
Fetsy an-trano hanatsarana ny faran'ny maina
Ny faran'ny maina dia mila fatra tsara amin'ny fanafody ao an-trano mba hanampiana ny hydration tsy ananany. Te hahafantatra ny tsotra sy haingana indrindra ve ianao?
Mikarakara volo miloko fotsy sy miloko
Ilaina tokoa ny fikolokoloana volo miloko fotsy na miloko, satria io no iray amin'ireo teknika izay maina indrindra ary manimba ny volo.
Bassta tsotra hanaovana anao
Jereo ity safidin'ireo fanavaozana ambany ity izay manana fahatsorana hahafahanao manao azy ireo any an-trano sy ao anatin'ny minitra vitsy. Adikao daholo izy ireo!
Fetsy vita an-trano hanaparitahana ny volo
Soso-kevitra sy tetika hampihenana ny volo ary hisorohana fatotra
Ny fahasamihafana eo amin'ny jiro UV sy ny jiro LED amin'ny fantsika gel
Ny fanamainana ny fantsika amin'ny gel dia tanterahina amin'ny hazavana ultraviolet na taratra UV, fa ny jiro jiro LED dia azo ampiasaina. Inona no tsy fitoviana? Jereo!
Tatoazy amin'ny rantsantanana ... fahamendrehana eny an-tananao
Ny tatoazy amin'ny rantsan-tànana dia nanjary nalaza teo amin'ny vehivavy satria tatoazy malina, kanto ary misy dikany izy ireo.
Ahoana no hikarakarana volo volomparasy volomparasy
Raha manana volom-boasary volomparasy na volomparasy ianao, aza hadino ireo torohevitra ireo mba haharitra kokoa ilay loko mahavariana.
Ny fanavaozana frantsay sy ny karazany hafa amin'ny tantaram-pitiavana
Ny updo frantsay dia iray amin'ireo taovolom-pankasitrahana indrindra sy taovolom-panambadiana. Taovolo nentim-paharazana izay hitanao amin'ny karazany maro
Taovolo 4 ho an'ny volo lava tsikelikely
Jereo ireo taovolo ireo ho an'ny volo lava tsikelikely. Hevitra tena tsotra 4 azonao atao ao anatin'ny minitra vitsy monja. Inona no andrasanao?
Ahoana ny fomba fanosorana ilay paoka?
Ny volon'ny vatan'ny boka dia tena mora tokoa amin'ny alalàn'ny «bleach» natao manokana hanafenana volo amin'ny faritra sasany amin'ny vatanao
Taovolo misy fehiloha mandritra ny fotoana tena manokana anao
Ny taovolo misy fehiloha dia iray amin'ireo loharano tsara indrindra ho an'ny volonay. Aza adino ireo dingana tsikelikely ireo.
Torohevitra 7 handravahana ny efitran'ireo ankizy kely
Torohevitra tsotra 7 handravahana ny efitranon'ny zanakao ary afaka manampy anao izy ireo. Aza adino izy ireo!
Platinum blond ombré manasongadina, ny famirapiratry ny fahavaratra
Ny fisongadinan'ny ombré dia miteraka fahatsapana na aiza na aiza alehany. Amin'ity tranga ity dia momba ny fahazoana feon-trondro na platinum manintona indrindra. Jereo!
Taovolo ho an'ny olona mpivady
Mitadiava hevitra samihafa hankafizanao ireo hetsika miaraka amin'ireto aingam-panahy amin'ny taovolo ireto ho an'ireo vahiny hanambady mandritra ny vanim-potoana.
Mihetsiketsika mankany anaty rano, taovolo fototra amin'ny fahavaratra ity
Hainao ve ny manao onja rano tonga lafatra? Jereo ny dingana tsikelikely avelanay anao ary koa toro-hevitra sy fika hahazoana taovolo lamaody
L'Oréal Professionnel X-Tense manitsy, ny fomba fampiharana
Jereo ny isan'ireo vokatra manitsy L'oreal X-Tenso ary ny fomba fampiasana azy ireo hanarenana ny volonao amin'ny fotoana fohy sy tena ara-toekarena.
Inona avy ireo Clarins Boosters?
Tonga tany amin'ny tsena espaniola izy ireo mba hijanona. Kely ny fantatra momba azy ireo, tsy menaka manokana izy ireo, fa vokatra noforonina ...
Primer sa crème BB? Safidio ny primer anao
Ny primer dia ampahany tena lehibe amin'ny fizotran'ny makiazy, ny primers sy ny menaka BB dia ao amin'ny lamaody, hanazava ny fahasamihafana misy amin'izy roa isika.
Karazana makiazy azo ampiharina sy mahomby efatra
Misy ny fampianarana tsy azo ampiharina satria sarotra atambatra ny lokony, manome karazana makiazy 4 izahay ka azonao atambatra araka izay itiavanao azy.
Hevitra 10 randrana ho an'ny volo fohy
Ianao ve mitady hevitra momba ny taovolo misy fehiloha ho an'ny volo fohy? Jereo eto ny andiana hevitra folo an'ny tsotra indrindra, voalohany ary ankehitriny.
Ahoana ny fomba fijery tsara tarehy miaraka amin'ny fanapahana pixie
Raha manana fanapahana pixie ianao dia azonao atao ny manatsara ny fangatahanao rehetra mba hirehitra hatrany. Te hanana toro-hevitra hahatsapa ho tsara tarehy ve ianao?
Taovolo miisa 4 mora voaangona
Ny taovolo semi-nanangona dia tonga lafatra avokoa na amin'ny antoandro na amin'ny alina. Aza adino ireo hevitra momba ny taovolo tsotra sy maoderina ireo
Makeup ho an'ny molotra miboridana
Ny molotra miboridana dia mety amin'ny karazana makiazy rehetra, na andro na alina, ary safidy tena azo ampiasaina izy io amin'ny fotoana rehetra.
Fomba famafana sy fanalefahana ny tanana maina
Torohevitra sy fanafody voajanahary hikarakarana ny hoditry ny tanana maina sy vaky
Fetsy mba ho mahia mahia
Fantaro ny fomba fijery manify kokoa amin'ny fitafiana stratejika, azonao atao ny mamorona ny effets optika amin'ny silhouette kely kokoa miaraka amin'ny refy mirindra kokoa.
Fanafody an-trano ho an'ny volo tsy misy aina
Raha manana volo tsy mananaina ianao dia aza misalasala mamaky sy mahita ireto fanafody roa ireto izay hahatonga ny volonao ho tsy mampino.
Famatorana volo, ny famenony ny taovolo
Ny fatorana volo dia fomba iray lavorary hamita ny taovolo rehetra misy lamaody. Avy amin'ny fehiloha mankany amin'ireo voangona sy pigtails. Jereo izy ireo!
Tanimanga voajanahary, fampiasana ary karazany
Ny tanimanga voajanahary dia manana fananana lehibe raha ny amin'ny fampiasana azy ho kosmetika, ary manana karazana tanimanga isan-karazany koa isika.
Ny farany mahitsy amin'ny volo: fanamainana mitsoka miandalana
Inona no fanamainana miadana mandeha? Jereo ny tombony sy ny fatiantoka an'ity teknika fanitsiana volo ampiasain'ny vehivavy maro ity.
Ny menaka mahomby indrindra hanafoanana ireo faribolana maizina
Ny fanesorana ireo faribolana maizina dia tsy asa mora foana araka ny eritreretinao azy. Raha sasatry ny mitady vahaolana ianao dia andramo ireo menaka izay atolotray.
Torohevitra 6 ho an'ny vatana salama sy salama
Amin'ny toetr'andro tsara dia te-hiverina hilahatra isika, ary noho izany mila manao fanatanjahan-tena isika, mihinana sakafo voalanjalanja ary mahazo fanampiana kely avy amin'ny vokatra toa an'i Alli.
Nangonina tsikelikely mba hahomby amin'ny fety
Ny fanangonana tsikelikely dia iray amin'ireo tolo-kevitra tsara indrindra hahafahana manao ny taovolontsika manokana ao an-trano. Jereo ireo hevitra romantika efatra ireo
Resipeo 5 ho an'ny volo misy menaka amandy
Ny menaka almond dia misy tombony betsaka amin'ny volontsika. Atorinay anao ny fomba fahandro 5 tsotra miaraka aminy izay hahagaga anao
Shampoo tantely vita an-trano ho an'ny volo salama kokoa
Ny shampoo tantely vita an-trano dia iray amin'ireo fanafody voajanahary tsara indrindra ho an'ny volonay. Mikarakara, mamelona ary manampy famirapiratana izy io. Jereo hoe ahoana no hanaovana azy!
Karazam-borona: safidio ny anao
Raha fiovana endrika no tadiavinao ary tsy azonao antoka ny fomba hanaovana azy dia mety ho vahaolana lehibe ny sisiny.
Ahoana ny fomba ahazoana manicure frantsay ao an-trano
Ampianarinay anao ny fomba fanaovana manicure frantsay tsikelikely. Hiseho ho tsara tarehy ny hoho, miaraka amin'ny fanapahana madio sy matihanina.
Taovolo taovolo mahatalanjona misy fehiloha hitaomana anao
Ny taovolo taovolo miaraka amin'ny fehiloha dia mety ho isan-karazany sy matetika, mametraka fironana sy fahamendrehana. Atorinay anao ireo tena mahavariana amin'ny andronao
Volo lava vs volo fohy: fantaro izay anao
Raha te hanova ny taovolo ianao ary tsy mahalala izay hatao, dia manampy anao izahay hanapa-kevitra, hahalala ny mahatsara sy maharatsy ny volo lava sy fohy.
Pigtails voalamina, fomba 5 hitafy azy ireo amin'ity vanim-potoana ity
Mahazo aina, tsy manam-potoana ... pigtails dia maka hatsarana mahonon-tena sy be pitsiny amin'ity vanim-potoana ity. Mampiseho anao tolo-kevitra catwalk izahay, alaivo tahaka izany!
Mikaroka ny fandanjalanjanao
Indraindray isika mila sentiana fandanjalanjana sy fitoniana amin'ny fiainantsika hiatrika ny isan'andro isan'andro. Aza…
Taovolo pigtail 8 misy kofehy mba hahomby
Pigtails misy fehiloha dia iray amin'ireo taovolo lamaody be mpitia. Tsotra sy mahazo aina amin'ny lafiny rehetra amin'ny andro. Adikao ny 8 izay asehonay anao anio!
Ny fikarakarana tsara indrindra ny volo tsara sy olioly
Betsaka ny fikolokoloana volo izay tsy maintsy raisintsika. Androany dia manolotra ny sasany amin'izy ireo ho an'ny volo tsara sy olioly isika. Jereo izy ireo!
Fametahana volo ho an'ny totozy lavorary
Ny fanodinana volo dia manampy amin'ny fanavaozana ny hodi-doha. Jereo hoe ahoana ny fanaovana azy sy ny tombony azo amin'ny fandroahana ity faritra ity ho an'ny volo salama kokoa.
Mahitsy ny maraokana ho an'ny volo tsy voafehy
Teknolojia novolavolaina tany Maraoka ny fanitsiana maraokana mba hanarahana modely ny volo milomano, simba ary frizzy. Te hanandrana ve ianao?
Ahoana ny fomba fampiharana ny makiazy tsikelikely mba hahazoanao tombony betsaka avy amin'ny tenanao
Raha te hahalala ny fomba fampiharana ny makiazy tsikelikely ianao, na amin'ny tarehy, na amin'ny maso, na amin'ny molotra, dia aza hadino izay rehetra lazainay aminao eto. Andao hatao!
Ahoana ny fomba ahazoana perm ao an-trano
Raha te hanana ny permy ao an-trano ianao dia hasehonay anao ny fomba anaovana an'ity torolàlana tsikelikely ity. Vahaolana mety tsara hanomezana ny volon'ny volonao.
Fitsaboana voajanahary ho an'ny volo hitombo haingana
Raha mampitombo ny volonao ianao ary toa tsy misy mitombo, andramo ireo fitsaboana voajanahary amin'ny shampoo sy sarontava. Ho hitanao ny fitomboany haingana!
Angano diso momba ny makiazy ho an'ny mena
Raha mena-mena ianao, dia azo antoka fa efa nolazaina imbetsaka ianao fa misy loko izay tsy azonao ampiasaina amin'ny makiazyo. Jereo ny marina ao ambadiky ny angano.
Fomba fanamboarana namboarina namboarina mba hahazoana volo mahitsy
Te hanana volo mahitsy ve ianao?, Avy eo dia aza hadino ireo fomba fahandro namboarina narosonay anio. Jereo ny valiny lehibe avelan'izy ireo amintsika
Taovolo ho an'ny volo lava, ny lamaody tsara indrindra
Jereo ny taovolo maoderina sy tsotra indrindra ho an'ny volo lava. Manomboka amin'ny fehiloha farany na fety na semi-naoty.
Mikarakara volomaso tsara tarehy
Ny volomaso tsara tarehy dia mamaritra tsara ny bika, ary izany no antony tsy maintsy hahafantaranao ny hikarakarana azy ireo. Raiso an-tsoratra ny tetika rehetra ho an'ny volomaso lavorary.
Fitsaboana an-trano ho an'ny hoditra misy menaka
Raha manana hoditra misy menaka ianao ary leo ny bika aman'endriny, dia manolotra famafana sy saron-tava an-trano izahay mba hadio sy salama ny hoditrao.
Taninoplasty, fantatrao ve io fomba hanarenana volo io?
Te hanana volo mahitsy sy tsy misy frise ve ianao? Avy eo mila taninoplasty. Fitsaboana revolisionera sy voajanahary miaraka amin'ny tombony maro. Jereo izy ireo!
Taovolo hanafenana ny orona
Raha manana orona misongadina mihoatra ny tianao ianao dia aza manahy fa manolotra taovolo vitsivitsy hanampy anao izahay nefa tsy mandeha ambanin'ny antsy.
Volo fohy misy bangs, ny tena irina?
Te hanova ny bika aman'endrinao ve ianao? Ny volo fohy misy bangs dia iray amin'ireo maniry indrindra ankehitriny; vaovao sy tsy miraharaha.
Fandokoana henna ny volonao
Raha mazoto mandoko ny volonao ianao dia azo antoka fa voamarikao ny vokatry ny fampiasana simika tsy tapaka amin'ny volonao. Fahamaina,…
Resipeo karaoty ho an'ny volo salama
Te hahita izay rehetra azon'ny karaoty atao amin'ny volonao ve ianao? Avy eo dia aza hadinoina ireo fomba fahandro ireo amin'ny karaoty ary ho hitanao ny valiny lehibe
Izy ireo dia mitafy ny 'bokotra boxer'
Ny fehiloha Boxer no fehiloha vaovao. Jereo ity taovolo voalohany ity hitafy amin'ny fotoana rehetra izay efa fironana eo amin'ny olo-malaza.
Makiazy ara-poko: makiazy nentanin'ny kolontsaina efatra
Jereo ny volavolan'ny kolontsaina efa-taona toa ny Japoney, ny Indiana Indiana, ny Arabo ary ny Afrikana. Ary mianatra mampihatra ny tsiambaratelony.
Fanafody an-trano 7 ho an'ny volo matevina
Te hanana volo matevina ve ianao? Aza hadino ny fanafody voajanahary fito izay arosonay anio ary azonao atao ao an-trano izany. Soniao izy ireo!
Torohevitra tsara tarehy mahatalanjona
Marina ny anao! Nahazo anay ianao, tsy maintsy ekentsika: Mitady fika hatsaran-tarehy tsy ampoizina foana izahay ...
Taovolo 5 misy fehiloha maoderina tsikelikely
Manaova fehiloha maoderina noho ireo hevitra dimy narosonay androany. Taovolo manaitaitra tsikelikely izay tsy azonao adino.
Fampiasana aspirinina 4 ho an'ny hatsaran'ny tarehy
Ny fampiasana aspirinina dia afaka miovaova be rehefa miresaka ny hatsarana. Androany dia mamela anao efatra izahay amin'ny endrika sarontava.
Ahoana no fandokoana ny tenanao ao an-trano?
Ny ankamaroan'ny fotoana dia maika isika ary zara raha manana fotoana ampy hamelana ny tenantsika handeha amin'ny salon ...
Famolavolana manicure fironana 6 miaraka amin'ny famaranana matihanina
Jereo ny endrika enina manicure lamaody izay hahagaga anao. Hevitra tena tsotra ary miaraka amin'ny fitaka tsy mety diso, ho an'ny vokatra mihoatra ny matihanina.
Ahoana ny fomba fanesorana ireo teboka maizina amin'ny tarehy
Raha misy pentina maizina amin'ny hoditrao, ankoatry ny faharetanao dia azonao atao manaraka ireto torohevitra manaraka ireto.
Tsiambaratelo hatsaran-tarehy an'ny malaza
Na manomboka mikarakara ny tenanao ianao na raha efa niaraka tamin'ny fanaonao isan'andro nandritra ny fotoana kelikely, dia samy ...
Taovolo 10 ho an'ny mpanambady, ny maoderina sy kanto indrindra
Ny taovolom-panambadiana dia mety miovaova be, saingy androany dia nifidy ny 10 kanto sy mahatalanjona indrindra azonao atao amin'ny fampakaram-badinao ianao. Jereo izy ireo!
Soa azo avy amin'ny glycerine legioma ho an'ny volo
Ny glycerine anana dia tsara ho an'ny hoditrao, fa fantatrao fa tsara ho an'ny volonao koa izany? Aza adino ny tombony azo avy amin'izany.
Taovolo misy solomaso, hevitra ho tsara tarehy kokoa
Mila manao solomaso isan'andro ve ianao? Avy eo dia aza adinoina ireo solom-bolo ireo amin'ny solomaso satria ny safidy roa dia azo ampifangaroina mba ho lafatra
Velomy amin'ireto loko tsotra vita an-trano ireto ny volonao
Raha te hanome fiainana ny loko voajanaharin'ny volonao ianao dia mahereza miaraka amin'ireny loko voajanahary namboarinay izay arosonay ireny. Ho tsara tarehy kokoa noho ny hatramin'izay ny volonao.
Paula Echevarría dia nitantara ny tsiambaratelony momba ny volon'ny Pantene taorian'ny reny
Nambaran'i Paula Echevarría tamin'ny fampielezan-kevitra nataony farany ny dikan'ny fitondrana vohoka sy ny reny ho an'ny volony, ary misy ny fikolokoloana ny volony.
Tadiavo ny solomaso mety aminao arakaraka ny endrik'ilay endrikao
Marary ve ianao raha ratsy ny masonao? Aza matahotra fa mila tetika vitsivitsy fotsiny ianao hahitana ny mety dia ho tsara tarehy ianao.
Sarontava vita an-trano hikarakarana volo miloko
Raha manana volo miloko ianao ary tianao hananany malefaka sy hydration ilaina foana izany dia aza hadino ireo sarontava vita an-trano ireo.
Botox volo hamerenana amin'ny laoniny ny fahasalaman'ny volonao
Ny botox volo dia iray amin'ireo fironana farany amin'ny taovolo. Raha tsy fantatrao izay misy azy na inona ...
Hihaona amin'ny fomban'ny pin up
Fantatrao ve ny atao hoe pin up? Fantaro ny lakileny rehetra ary avoahy ny lafiny ara-nofo indrindra amin'ity fomba vehivavy ity. Ho faly ianao.
Nangonina ho an'ny volo fohy, ny taovolo tsotra indrindra!
Mitady fanavaozana ho an'ny volo fohy ve ianao? Eto no hahitanao ny taovolo faran'izay tsotra sy kanto indrindra azonao atao ao anatin'ny minitra vitsy monja.
Sarontava vita an-trano ho an'ny hoditra maina amin'ny tarehy
Ny saron-tava vita an-trano ho an'ny hoditra maina amin'ny tarehy dia misy akora voajanahary izay manampy amin'ny famandoana azy ary mampihemotra ny fisehon'ny ketrona.
Makiazy metaly amin'ny endrika manjelanjelatra
Ny makiazy amin'ny maso miaraka amin'ny aloka metaly dia loharano tsara foana hampamirapiratra ny masontsika mihoatra ny taloha. Jereo sy adika ireto ohatra ireto!
Omeo fotoana fanindroany ny kosmetikao
Holazainao amiko ve fa tsy mba nandatsaka aloky ny tany mihitsy ianao ary ...
Makeup hitafy lokomena nofinofy
Raha te hizaha any ankoatry ny mavokely sy mena ianao dia mankanesa any amin'ireto lipstika fanta-daza ireto amin'ny manga, mainty, maintso ary volomparasy. Mampianatra anao hitafy azy ireo izahay.
Fomba fanamboarana velarana parasy amin'ny jiro
Raha manana parasy ao an-trano ianao dia izao no fotoana hanariana azy ireo. Jiro ambony latabatra ihany no ilainao ary ny zavatra hafa kely. Te hahafantatra ny fomba hanaovana izany ve ianao?
Volo Ombre: mety amin'ny teti-bola kely
Raha nankaleo tamin'ny volon'ny volonao ianao fa tsy manam-bola handehanana tsy tapaka any amin'ny salon dia andramo ny volo Ombre. Ho amin'ny lamaody farany ianao!
Fahazarana 3 ho lasa tsara tarehy kokoa
Misy fanao sasany izay tsy maintsy raisina mba ho tsara tarehy kokoa, fantaro ireo telo ireo dia ho hitanao ny mahasamihafa azy.
Ny fitsaboana volo be mpampiasa indrindra
Ny fitsaboana volo be mpampiasa indrindra dia mitondra fiainana sy halemem-panahy bebe kokoa amin'ny volonay. Jereo hoe iza izy ireo ary ny vokany rehetra
Fironana amin'ny taovolo, ny undercut
Ny undercut dia fironana vaovao amin'ny volon-doha ho an'ny vehivavy, tena sahy sy tany am-boalohany, izay misy ny fiharatra ny tendany.
Ponytails misy onja, taovolo izay handresy anao
Ny ponytails mavesatra dia revolisiona eo amin'ny taovolo lamaody. Jereo ireo hevitra ireo isaky ny fotoana
Sarontava volo namboarina alina
Ianaro ny fomba fanaovana sarontava volo namboarina, izay tsy maintsy ataonao mandritra ny alina mba hahazoana ny vokatra tsara indrindra.
Ahoana no hahalalana raha mahomby ny crème
Eto izahay dia manolotra kandidà iray amin'ny fanontaniana an-tapitrisany dolara: Ahoana no ahafantaranao fa mahomby ny crème? Satria impiry ...
Makà volomaso lavorary
Ny volomasontsika dia ny volon'ny tarehinay, tadiavo hoe iza amin'ireo no mety indrindra aminao arakaraka ny endrikao sy ny fomba ahazoana azy ireo. Ho tsara tarehy ianao.
Tadiavo ny lokon'ny volonao mifanaraka amin'ny volon'ny hoditrao
Na manana loko mavokely, mavokely, mena, na mainty ianao, dia misy loko volo mety aminao. Jereo hoe inona izany ary mahatsiaro mahatalanjona.
Tsiambaratelo momba ny vehivavy tokony ianaranao avy amin'ny renibenao
Ny vehivavy rehetra dia misy tsiambaratelo hatsaran-tarehy, fa ny tsara indrindra dia lova avy amin'ny reninay sy renibenay.
Ahoana ny fikolokoloana ny volonao hanafenana ny baolinao
Raha avelanao ho lava ny valahanao na voakapa ratsy izy, aza manahy fa hasehonay anao ny fomba fanaingoana azy ireo mba hahafinaritra anao rehefa mitombo izy.
Taovolo Taylor Swift, ny tsotra maka tahaka azy
Azonao atao izao ny maka tahaka ny taovolo an'i Taylor Swift hahafahanao manao ny tenanao. Jereo ny safidin'ny fanavaozana, soavaly soavalava, tsipìka ary maro hafa izay asehonay anao
Makiazy epoch efatra
Sahia amin'ny makiazy aingam-panahy avy amin'ny 20, 50, 60s na 80s ary tsy hamela olona tsy miraika ianao, ho babo ny rehetra.
Randrana tsikelikely miaraka amina video manazava sy tena tsotra
Anio dia asehonay anao ny taovolo miravaka tsikelikely hahatratrarana vokatra lavorary. Aza adino ireo fampianarana video ireo ary makà taovolo folo